FAMPANOAVANA AMBONY : Hametrahana sampandraharaha fandraisana olona – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 7:14
Hamafisina ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny Fitsarana.
Accueil/Politika/FAMPANOAVANA AMBONY : Hametrahana sampandraharaha fandraisana olona
FAMPANOAVANA AMBONY : Hametrahana sampandraharaha fandraisana olona
Lucien R. 12 février 2021
Isany mampirongatra ny trangana kolikoly eny anivon’ny Fitsarana ny tsy fahafahan’ny olona manaraka ny antontan-taratasiny momba ny raharaham-pitsarana iray. Ela loatra ny fiheveran’ny daholobe ny fikirakirana antontan-taratasy eny anivon’ny Fitsarana. Misy anefa ireo manana havana efa naiditra am-ponja vonjy maika no tsy mahandry izay fotoam-pitsarana izay ka tafaroboka amin’ny fanaovana kolikoly. Noho izany indrindra no maha zava-dehibe ny fametrahana ny « service accueil » na ny sampandraharaha fandraisana olona eo anivon’ny fampanoavana ambony. Tanjona, araka ny fanazavana ny hahafahan’ny olom-pirenena tsirairay manaraka ny antontan-taratasiny eny anivon’ny Fitsarana, ka ialan’ny ahiahy sy mba ho fanampim-panazavana ihany koa amin’ireo dingana rehetra tsy maintsy arahina rehefa manana antontan-taratasy eny anivon’ny Fitsarana.
Isany fanovana entin’ny Toniam-pampanoa lalàna ambony vaovao eo anivon’ny fitsarana ambaratonga faharoa eto Antananarivo, Rtoa Razafiarivony Berthine, io araka ny fanazavany omaly nandritra ny lanonana fametrahana azy tamin’ny toerany ara-pomba ofisialy. « Zava-dehibe ny fametrahana io sampandraharaha vaovao io satria hahafahan’ny olona rehetra izay manan-draharaha eo anivon’ny Fampanoavana ambony mahafantatra hoe aiza ho aiza ny antontan-taratasiny, ary izany dia maimaim-poana avokoa. Hisorohana ny kolikoly mety hitranga », hoy ny fanazavany.
Ankoatra izay anefa, nilaza koa ity tomponandraikitra vaovao ity, fa hafainganina ireo raharaha misy fitanana am-ponja vonjimaika rehetra. “Anisany mampimenomenona ny olona ny fahelan’ny fikirakirana ny antontan-taratasy amin’ireny raharaha ireny”, hoy izy. Tetsy ankilany, nanome toky ity tomponandraikitra ity mahakasika ny fahaleovantenan’ny Fitsarana amin’ny fanatanterahana ny asany. Efa voalazan’ny Lalàmpanorenana izany, hoy izy, ka tsy maintsy hajaina.
Isany nanatrika ny lanonana ara-pitsarana, omaly, ny Minisitry ny Fitsarana malagasy, sady mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, Andriamahefarivo Johnny Richard.
ADY AMIN’NY COVID-19: Nanome fitaovana mitentina 90.000 Euros ny Alemana
FITONDRANA RAJOELINA : Tsy misy mahasakana ny asa fampandrosoana ataony
ASA FANAOVAN-GAZETY : Miroso ny fikarakarana ny karatra maha matihanina
GOVERNEMANTA NTSAY: Minisitra efatra vaovao, manohy ny asa ny ambiny
DIASPORA AO FRANTSA: Ho afaka handray anjara amin’ny fifidianana amin’ny 2023